Ever ka carooday sida loo spam fariimaha qoraalka ah ee aad iPhone ama Android? Qoraallada Spam ay soo badanayaan iyo raad hoos emaillada ku dhow yahay inuu wax aan macquul aheyn. Warka fiicani waxa weeye waxaa jira in xal loo helo fariimaha qoraalka ah ka xanibeen. Fariimaha Spam lagu shiidaa xannibi kara gaarey telefoonka. Waa muhiim in la fahmo macnaha guud ee dhibaatadu ka hor sahaminta siyaabaha ay u xaliyaan sidii ay u xiri fariimaha qoraalka ah ee iPhone ama Android. Isku day inaad ka xanibeen tirada spammer ah, laakiin haddii ay dhacdo, halkaas oo tirada ka Qarsoonba, fariimaha qoraalka ah xanibeen habboon tahay. Intaa waxaa dheer, waxaa jira tiro ka mid ah barnaamijyadooda loogu talagalay fariimaha qoraalka ah ka xanibeen.
Qaybta 1aad: Sida loo xannibi dhowr ah, kaas oo dhowaan aad u soo diray qoraal spam ah
Qeybta 2: Sida loo xannibi dhowr ah oo ka mid ah liiska xiriirkaaga
Qeybta 3: Isticmaalka barnaamijyadooda xisbiga saddexaad si loo joojiyo farriimaha qoraalka ah spam ee iPhone iyo Androids
Tani waxa aad u fudud oo aan u baahnayn xirfadaha wax farsamo si ay u soo shaqeeyaan. Kuwa soo socda waa tallaabooyinka lagama maarmaanka u ah ka xanibeen dhowr ah, taas oo uu aad u soo diray qoraal spam ku saabsan iPhone ama Android.
Step1. Tubada iyo qaban fariin qoraal ah spammer ah
Tubada oo ku darto fariin qoraal ah soo diraha ilaa Delete fariin ah ama dar spam doorasho ayaa la soo bandhigay midig sare ee shaashadda. Door Add to Spam si toos ah u madow tirada spammer ah.
Step2. Daar filter spam ah
Laga soo bilaabo Settings hoos u dhaqaaq filter Spam iyo tubbada ku yaal.
Step3.Ensure in habkaani ku yahay
Ka dib markii ay ku soo jeestay oo ku filter Spam , hubi in badhanka on sare ee shaashadda waa cagaar ah (taasi waxay caddaynaysaa in filter uu saaran yahay).
Step4. Ku dar tirada liiska spam
Door Add to Numbers Spam ka saarney filter spam ah. Halkan, gacanta ka mid ah lambarada ka Xiriirada ama Guda Call. Blocks Tallaabadan fariimaha qoraalka ah ee ka dhan xiriirada aad daray liiska spam aad.
Fiiro gaar ah: Haddii aad xannibi, mararna la aqoon, aad si fudud u baabi'iyo fursadaha shakhsiyaad aan aad liiska abid aad la xiriirto. The mararna la garanayn waxaa laga yaabaa in saaxiib ama qaraabo aad. Sidaa daraaddeed waxaan ku talin lahaa xanibeen tirada oo keliya u gaar ah.
Step1. Ka tir-tir tiro ka goobta
Aad Goobta markaas Wac ee Block . Ugu dambeyntii Ku dar cusub oo tiradoodu buugga Block ah
Tallaabada 2.Select tirada
Dooro tirada aad rabto in aad xannibi ka Xiriirada liiska.
Step3. Haddii kale, dib u soo ceshano xiriir ka farriimaha aad
Waxaad sidoo kale dib u soo ceshano karaa xidhiidh ah ka Messages ama baaqyo dhawaan ka dialer.
Step4. Tubada "i" soo socda tirada ama magaca
Ka dib markii xulashada tirada xiriir ah, tuubada "i" xiga magaca xidhiidhka ama nafteeda lambarada telefoonka.
Step5. Ka tir-tir tirada
Hit ku Block sanduuqa wada hadal hoose ee shaashadda. Tani waxay si toos ah u xiri doonaan tirada ka soo xiriirto si aad wicitaan ama fariimo.
Wondershare Dr.Fone Ee macruufka - iPhone Message Recovery
Qeybta 3: Isticmaalka barnaamijyadooda xisbiga saddexaad si loo joojiyo farriimaha qoraalka ah ee Android oo iPhone
Soosaare # 1.Meme
Tani waa app a free kuu ogolaanaya inaad si ay u abuuraan memes kuu gaar ah. Waxay kuu ogolaanaysaa inaad beddesho qoraalka la tuubada kaliya, taas oo laga yaabo inay qaadato in ka badan hal line. Waxa kale oo ay si toos ah dhejisaa memes in goobaha ugu caansan aad.
Waxa ay taageertaa telefoonada android, iPod, iPad, iyo iPhone. Faa'iido
Waxay ku faantaa sida app kaliya ee caawin kara memes badan -image.
Waa mid aad u fudud in ay si gaar ah u isticmaalaan bilaabo. Asal ahaan app loo naqshadeeyey ayaa ku soo bilaaban in ay dareen
Waa qaali. Waxa ay haatan u soo iibsadaan version ayaa aad u qaali ah.
TextCop kuu ogolaanayaa inaad Unsubscribe ka fariimaha qoraalka ah aan loo baahnayn oo ka baxdo ka farriimaha premium. Waxa ka muhiimsan, tani app cabsi badan idinka Koriya waqti badan iyo lacag ka mobilada premium diiqayaa. App Tani waxay sidoo kale kaa caawinaysaa in aad la wareegay koontaroolka telefoonada biilasha iyo fariimaha aad.
Waxa ay taageertaa iPad iyo iPhone Faa'iido
Waxaa laga baarayo karaa qoraallada iyo iMessages u phishing fiisa ama wax kasta oo xubno khatar.
Ayaa awood u gooni ah warbixinta fariimaha spam iyo lambarada spam. Tani waxay u ogolaaneysaa in la qaado tallaabo ku habboon in la qaado si looga fogaado in dhacdooyinka sida mustaqbalka.
Macluumaadka lala qeybsanayo database waxaa laga yaabaa in u ganay qatar ah gaar ahaan marka la xogta shakhsiga muhiim ah wax looga qabto.
# 3 Mr. Number app
Tani waa app user-friendly ah, si dhaqso ah oo u fudud in ay si gaar ah u isticmaalaan marka ay taabato markii ugu horeysay. Waxa uu leeyahay fursado badan u sida loo xannibi fariimaha qoraalka ah iyo sidoo kale ku baaqay in aan la rabin ka mid shakhsi ah, xeerka deegaanka gaar ah ama dunida oo dhan. Waa awood badan oo ku jira tiro dambe kor eega, waayo telefoonka aad Android.
Waxa ay taageertaa Androids iPhone ama labada nidaam ka hawlgala. Faa'iido
Waxay leedahay ID Yeedhe u suurta kuu ogolaanaya inaad si ay u aqoonsadaan spammer ah.
Waxay leedahay Lookup ah tirtiri, taasoo ku siinaysaa macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan spammer ah.
Waxay leedahay tiro kooban oo lookups. The labaatan lookups reserve hore waa qarashka wax lookups dheeraad ah.
Waa kuma jirto fursad u dhoofinta log oo uu leeyahay xayeysiis pop-up joogto ah.
App # 4.Phone Warrior
Tani waa app awood leh loo isticmaalo si loo joojiyo farriimaha la rabin oo ku baaqay in buuqa aad android iyo iPhone. App tiirsan badan oo ku saabsan fikradda guud ee barashada mashiinka iyo dad Xigashada u tiro ka yar category spam ah.
Waxa ay taageertaa Androids, Symbian iyo nidaamka qalliinka Blackberry. Faa'iido
Lagu kalsoon yahay. App wuxuu u shaqeeyaa si aad u wanaagsan sidaas baabi'inta dhibaatada emaillada joogto ah.
Habka Cusub. Fikradda la isticmaalo mabda'a codsanaya qayblibaaxna dadkii badnaa ka mid ah tirada waa mid aad u cusub halkii fikrad cad.
Waxay u badan inay iska eafiya iskana mabaadi'da aasaasiga ah design iPhone. Phone ayaa yeelan kara feature gaar ah u badalaya on ama farriimaha kale ee aan ahayn soo bandhigeen farriimaha hor istaagay ka app.
Hel Grooveshark Music galay Google Music Library
Download Google Music Player for All Ajandooyinka
> Resource > Android > Sida loo tir-Messages Spam On Your Android oo iPhone